Android 10 Go dia havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny fararano | Androidsis
Android 10 Go dia mandefa ity fararano ity miaraka amin'ny fanatsarana maro
Eder Ferreno | | About us, Android Version
Android Go no dikantenin'ny rafitra fiasa ho an'ny telefaona ao anatin'ny faritra ambany. Marika maro, toa an'i Wiko, ampiasain'izy ireo ity kinovan'ny rafitra fiasa ity, izay efa nanana kinova roa (miorina amin'ny Oreo sy Pie). Ary farany, Google izao dia manamafy ny fanombohana ny Android 10 Go amin'ny fomba ofisialy amin'ity fianjerana ity. Kinova vaovao miaraka amin'ny fanatsarana.
Nandritra ny herinandro maro no nandrasana hahalala zavatra momba ny fisian'ity kinova ity ary tonga ny fotoana. Misy ny Android 10 Go, havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny fararano, ary ny orinasa dia mamela antsika hanana vaovao manan-danja roa amin'ny asany, izay azo antoka fa noraisina tsara.
Android 10 Go dia ho haingana kokoa ary azo antoka kokoa, araka ny nambaran'ny orinasa tenany. Io dia hamela ny fampiharana ny rindranasa ao amin'ny rafitra fiasa ho 10% haingana kokoa noho ny tamin'ny kinova taloha. Zavatra hanome ny mpampiasa traikefa be mpampiasa kokoa amin'ny fotoana rehetra.
Ho fanampin'izay, nitarina ny isan'ny telefaona afaka mampiasa azy. Hatramin'izao dia nifantoka tamin'ny modely miaraka amin'ny RAM hatramin'ny 1,5 GB izy ireo. Fa izao dia hitarina izao, noho izany koa ireo fitaovana manana RAM 2 GB manana fidirana amin'izany ary mahazo tombony amin'ireo tombony ireo.
Ny fiovana lehibe hafa amin'ny Android 10 Go dia misy ny filaminana. Voamarina fa mampiditra Adiantum an-tanindrazana. Araka ny efa fantatry ny maro aminareo dia rafitra fanaovan-drakitra rakitra izay natao ho an'ny fitaovana ao anatin'ny faritra ambany, izay efa noresahinay taminao taloha.
Noho izany, herinandro vitsivitsy monja dia efa ofisialy Android 10 Go. Andiam-panavaozana ity rafitra fiasa ity ho an'ny telefaona ao anatin'ny faritra Android ambany. heverina modely ho tonga amin'ny fiandohan'ny taona 2020 izay mampiasa an'ity kinova ity amin'ny fomba natoraly.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Android 10 Go dia mandefa ity fararano ity miaraka amin'ny fanatsarana maro
Fomba telo nohamarinina izay ho ao amin'ny Pixel 4
Ny OnePlus 7T izao dia ofisialy, miaraka amin'ny fakantsary nohavaozina tanteraka